Magaalada Virginia Beach Erosion Council waxay iibsatay Dredge - Ellicott Dredges
Ellicott® Brand Taxanaha 970 Dredge "Rudee Inlet II"
Ellicott® International waxay u dhiibtay cutterhead dredge "Rudee Inlet II" Magaalada Virginia Beach, USA. 14-inch Taxanaha 970 qod ayaa loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo xeebta madadaalada ee magaalada loo dalxiis tago. Derejadu waxay bedeshay nooca loo yaqaan 'Ellicott®' dredge brand-ka oo kharashka waqtigiisa dhimista iyo dayactirka ay keeneen Golaha nabaad-guurka ee magaalada inay ku taliyaan beddelaad.
Golaha Erosion waa shan xubnood oo ka kooban shan xubnood oo lagu soo eedeeyay inay hayaan dayactirka xargaha dalxiiska. Goluhu wuxuu sii waday kartida macdanta ciidda ee Rudee Inlet in kabadan 25 sano, iyadoo la asaasay barnaamij joogto ah oo buuxinta xeebta.
Guddi hawleed ayaa u xilsaaray Maareeyaha Magaalada inuu kor kala socdo soo iibsashada cusub. Kaaliyaha Injineerka Magaalada iyo Kormeeraha Guud ee Golaha Masruufka ayaa horumarinay faahfaahinta tafaasiisha cusub iyadoo laga caawinayo Xarunta Kobcinta Injineeriyada Xeebta ee Philadelphia.
Martiqaad martiqaad ayaa la bixiyay. Kadib dib u eegis lagu sameeyay dalabyada ay sameeyeen howl wadeenada, Ellicott® International ayaa heshay qandaraaska. Magaalada Virginia Beach ayaa leh marin biyoodka, kaas oo ay ku shaqeyn doonaan Golaha Xawaareynta ee hawadooda ka tallaabsanaysa Rudee Inlet.
Waxaa dib looga daabacay Dib-u-eegista Caalamiga ah